Hub Al-Shabaab uga soo daga xeebaha oo laga hortagayo | Afrikada
Hub Al-Shabaab uga soo daga xeebaha oo laga hortagayo
Afrikada, Muqdisho: Dowlada federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka hortageyso hub al-Shabaab uga soo daga xeebaha Soomaaliya.
Gaar ahaan waxay sheegtay in hubkaasi kasoo dago dekedaha ay maamusho xarakada al-Shabaab. Wasiir kuxigeenka ammaanka C/Naasir Saciid ayaa sheegay in dawladu ay wado qorshe looga hortagayo hubka ay la soo dagaan al-Shabaab iyo Daacish.
Wuxuu sheegey in dawladu dhisi doonto ciidamada xeebaha lana tayeyn doono si xeebaha Soomaaliya ay uga shaqeeyaan hubkaasi lasoo dajiyana ay uga hortagi lahaayeen.
“In aan ka hortagno ururada argagixisada adeegsiga ay adeegsanayaan baddan Soomaaliya ee iska furan noqotay iyaga oo hub kala soo daga gobolada qaar kuna dhibaateeya shacabka Soomaaliya. Arrimahaasi oo dhan markaan aragnay waxaan istusnay in aan dhisno ciidamada illaalada xeebaha Soomaaliya.” Sidaasi ayaa uu yiri C/Naasir Saciid.
Hubka ayaa badi la sheegaa in al-Shabaab ay ka keento dalka Yemen. Al-Shabaab ayaa ah xarako u badan dhanka koofureed ee Soomaaliya iyo buuraha Galgala ee Puntland Daacishta Soomaaliya ayaa iyana kusugan Puntland.
READ MORE: Kooxo Hubeysan Oo Dil Ka Geystay Degmada Afgooye